Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nekudzikiswa kwakapetwa kwemirau iriko, Hurumende iri kugadzirisa ruzivo rweChikamu Chekutanga, ichiri kuenderera kuyedza kwakasimba kuona kuti kuvhurwa kunogona kuitika sezvakarongwa.
panguva Covid-19 musangano wenhau nhasi, Chipiri, 28 Kubvumbi 2020, mushure memunamato naPastor Dave Tayman, vatungamiriri vevoruzhinji vaona kuti kunyangwe hazvo hutachiona huripo, Cayman Islands yakatarisana nehurefu hwakaoma uye hwakaomarara hwehupfumi.
Izvo zvakaziviswa zvakare kuti vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi manomwe nemaviri vabva kuCayman Islands, kana kuti vari kuenda svondo rino nendege dzakarongwa kuenda kuUK, Miami, Canada neCancun, Mexico.
Pamusoro pezvo, maCaymaniya ma198 nevagari veNguva Dzose vakadzokera kuCayman Islands pane nendege kusvika parizvino.
Chief Medical Chiremba Dr. John Lee yakashuma kuti:
Makambani akazvimirira emakambani anoshandisa vashandi vepamberi vachange vachigamuchira maemail kubva kuDhipatimendi reZvekutengesa neZvivakwa maererano nekuyedzwa kwevashandi vavo.
Mhosva nhatu dzakanaka kubva pamigumisiro yemiedzo ye187 dzakaratidzwa. Mumwe wavo ane nhoroondo yekufamba, mumwe akasangana neyekare nyaya yakanaka uye mumwe anofungidzirwa kuve kuburikidza nekubatana kwenzvimbo.
Pamatatu akanaka, mumwe mushandi wezvehutano kuHSA, uko varwere nevanoona nezvehutano vanochengeta nekushandisa zvese zvinodiwa PPE protocol. Chero ani anotumirwa kumba kuti apore mushure mekuongororwa hutachiona anoongororwa zuva nezuva uye pasi pekutarisirwa kwakasimba Vese vanokurudzirwa kufonera 911 kutanga kana vachinzwa zvakanyanya kana kuva nehanya nemamiriro avo.
Kuchengeta uye kuongorora kunoenderana nezviitiko zvakasiyana.
Chiremba Wehutano, Dr. Samuel Williams-Rodriguez akati:
HSA inoenderera mberi nekupa rubatsiro rwechimbichimbi nekukurumidzira uyezve yave kufunga nezvekupa sarudzo.
Iko kushandiswa kwePPE kwave kuchiteerwa nekushingaira kwemavhiki akati wandei kuHSA izvozvi.
Mhedzisiro mhedzisiro nhasi inosimbisa kuti iyo Cayman Islands haigone kuzvifunga pachayo kubva musango parizvino, kunyangwe iri kufamba munzira kwayo. Mavhiki mashoma anotevera achave akakosha.
Nemamiriro aya, Hurumende iri kuronga kurerutsa zvirambidzo muzvikamu kubva Muvhuro, 4 Chivabvu Ipo Cayman Islands iri kuita zvakanaka muhuwandu hweyedzo yakaitiswa, pachine zvisati zvakwana kuita zvirevo zvine hungwaru nezve hutachiona hwehutachiona munharaunda. Naizvozvo zvirevo zvakatemwa zvinosanganisira kusuduruka mumuviri, kugezesa maoko nguva zhinji uye hunhu hwakanaka hwekufema hunofanirwa kuramba huchichengetedzwa.
Dambudziko rekuwana foni yeWORC 945-9672 iri kugadziriswa kuti ive nechokwadi chekuti yekutanga iyo yekufona kumisikidza yakadzorerwa. Kana vanhu vasingakwanise kupfuura nenhamba iyi, vanofanirwa kutumira mameseji kana WhatsApp WORC panhamba 925-7199 kuti vabatsirwe. Iyi nhamba ndeyekutumira mameseji chete.
Mitemo yakadzikwa mudare reparamende svondo rapfuura - National Pensions, Customs uye Border Control, Labour, Immigration (Transition) uye Traffic Laws - ese anotenderwa naGavhuna uye ari kuiswa mugazeti nhasi.
Mukupindura kunetsekana nekusakwanisa kwevamwe kusvika kune avo vanopa pension, masangano aya azivisa kuti, zvichidzivirira iyo ine dambudziko repasango, ese ari kushanda ari kure uye mimwe mibvunzo inosvika zviuru zvitanhatu yatambirwa uye iri kutarisirwa.
Ndege yekuHonduras inosimbiswa neMuvhuro, 4 Chivabvu yatengeswa zvachose. Ndege yechipiri irikugadzirirwa ine ruzivo rwunotarisirwa mangwana, Chitatu, 29 Kubvumbi.
Mamwezve ruzivo nezve nendege dzinoenda kuDominican Republic neCosta Rica anotarisirwawo uye achaburitswa.
Ndege yeBA ichisvika gare gare nhasi ichaunza vanodzoka maCaymaniya neVagari veNguva dzose pamwe nevashandi vekuchengetedza veku UK gumi nevaviri, vese vachatarisana nemazuva gumi nemana ekumanikidzwa kuzvivharira munzvimbo dzehurumende.
Pamusoro pezvo, timu inoenda kuTurks neCaicos vanosvika nhasi, vachange vari vega vari vega pamwe nevashandi veBA kusvikira ndege yasimuka mangwana.
Runyerekupe rwekuti kusvika kweBA ndege kwakanonoka kuburutsa mumwe munhu achidzoka kuCayman Islands mushure mekuyedzwa kweiyo COVID-19 hachisi chokwadi zvachose. Nyaya yehunyanzvi yakanonoka kubhururuka kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu isati yasimuka kuenda kuCayman Islands pakutanga nhasi kubva kuLondon.
HE Gavhuna akayambira kuti kufambiswa kwemashoko enhema nerunyerekupe "kwakaipa kwazvo" kune vese vari muZvitsuwa.
Kubva 5 Kurume, vanhu makumi mana nevasere vakabuda ne BA ndege imwe, maviri eMiami nendege imwe yeCanada. Vhiki rino 408 ichave ichienda kuburikidza neiyo imwe ndege yeBA, mbiri kuenda kuMiami uye imwe ndege kuCancun, Mexico.
Ndege yakamiswa kuNicaragua iri kukurukurwa nevakuru venyika iyoyo nechinangwa chekuronga imwe ndege pamwe neyekuenda kuColombia.
Gavhuna akapa mhere kuvashandi veCivil Aviation Authority kuti vabatsirwe nendege idzi.
Kuedzwa kweCayman Islands kwakasimba kwazvo, nevashandi vachiita kuyedzwa kwakakodzera kudos.
Musangano uchangoburwa pakati pevarapi mune veveruzhinji uye vakazvimirira zvikamu zviri kubata nekupindura dambudziko reCOVID-19 zvakaratidza mhando yepamusoro yekutarisirwa kuri kupihwa muCayman Islands.
Avo vanotsvaga kutarisirwa nekukurumidza vanofanirwa kushanyira kiriniki yeHSA yekuchengetedza yakaoma iyo yakavhurwa Muvhuro kusvika Mugovera. Dambudziko rechokwadi chete rinofanira kuenda kuchikwata cheA & E. Kune ese zviratidzo zvechirwere, vanhu vanofanirwa kubata hotline flu. Vanhu vanoda kuenda kuchipatara vanobvumidzwa kutyaira kuenda nekudzoka kuchipatara.
Minister vakadaidzira kune vese vakasvika kuIzviwi, uye vakaita mafambiro akanaka mukuendesa Cayman Islands kumberi, uyezve kuTilly's Restaurant yekupa chikafu kune vashandi vezvehutano.
Kubva ku Komisheni wePurisa:
Kuomeswa kwekudzoka kumba kunotanga zuva nezuva na7 dzemanheru uye kunoenderera kusvika na5 mangwanani. Zvese, kunze kwevaya vanoonekwa sevanokosha vashandi, vanofanirwa kushanda pasi pekuvharirwa kwakasimba mukati memaawa aya. PaSvondo, kukiya ndeye maawa makumi maviri nemana akazara.
Mitemo yese panguva yakadzikama yekubuda nguva inofanirwa kudzidziswa kudzivirira kutarisana nezvirango. Izvi zvinoreva kuti vasiri-vakakosha vashandi vanogona kungobuda mumba kuti vaite mabasa akakosha anotenderwa muParuzhinji Hutano Mitemo.
Mabhichi ese anoramba ari pamiganhu.
Kubva pamakumi masere nesere ezviwanikwa zveongororo zvakagashirwa, vatatu vakaongorora vaine hutachiona. Iyo positives zvichiteerana ine nhoroondo yekufamba, kusangana neyemberi yakanaka uye imwe inofungidzirwa sekutapurirana kwemuno.
Chero kurerutswa kwezvirambidzo kuchave muzvikamu nemavhiki maviri pakati pechikamu chimwe nechimwe panguva iyo kuyedzwa kuchizoramba kwakasimba kuona kuti chikamu chiripo hachidzikiswe uye chikamu chinotevera chinogona kutanga
Chikamu chekutanga chakatemerwa kutanga neMuvhuro, 4 Chivabvu 2020 kana zvawanikwa bvunzo vhiki rino zviri kukurudzira zvakakwana kubvumira kuti izvo zviitike. Chikamu chekutanga chinotarisirwa kubvumidza kerbside kuendesa zvimwe zvinhu.
Chikamu chechipiri chekuvhurwa chakatarirwa Muvhuro, 18 Chivabvu uye chinosanganisira kuvhurwa kwezvikamu zvakaita sekuvaka. Nhoroondo dzevose dzichiri kushandiswa pairi.